Ungashintsha kanjani indlela yokulanda yohlelo lokusebenza lwe-SnapTube? - LifeBytes | I-LifeBytes
Ungayiguqula kanjani indlela yokulanda yohlelo lokusebenza lwe-SnapTube?
I-SnapTube Video Downloader iyisilandi sevidiyo esihle kakhulu samadivayisi wakho we-android asetshenzisiwe njengamanje. Ivumela ukulanda okuvela kumawebhusayithi ahlukene afana ne-YouTube, MetaCafe, DailyMotion kanye ne-Facebook ne-Instagram. Yize kuyisicelo se-android, asitholakali ku-Google Play Isitolo. Isizathu ukuthi iGoogle ivimbela konke ukulandwa kwamavidiyo kwe-YouTube. Kepha kunezinye izindlela ezingatholakala.
1 Izici zohlelo lokusebenza lwe-SnapTube Downloader:
2 Ngikushintsha kanjani indawo yokulandwayo kuhlelo lokusebenza lwe-SnapTube?
3 Inqubo yokushintsha indlela yokulanda:
4 Isebenza kanjani i-SnapTube?
Izici zohlelo lokusebenza lwe-SnapTube Downloader:
landa i-Snaptube APK, isikhombimsebenzisi esibonakalayo esimangalisayo sohlelo lokusebenza sikuvumela ukuthi uphathe isilandeli ngokushelela.
I-SnapTube iza nezinketho zokusetha ezahlukahlukene ukusheshisa ukulanda ividiyo.
I-SnapTube inikeza injini yokusesha enamandla kanye nezithonjana zesithonjana sangokwezifiso.
Ngaphezu kwalokho, inikeza amavidiyo wokulanda anekhwalithi ye-60FPS nesisombululo se-4K.
Ukukunikeza ukulanda okusheshayo, uhlelo lokusebenza lusebenzisa ukuxhumana okuningi.
Uzothola yonke iwebhusayithi endaweni eyodwa.
Azikho izikhangiso noma izigelekeqe.
Ungalanda amavidiyo abethelwe ku-YouTube.
Kalula, kungenzeka ukuguqula ifayela levidiyo libe elalelwayo.
Umsebenzi wamabhukhimakhi uyatholakala. Ungahlela futhi ukulandwa okuningi ngasikhathi sinye.
Ngikushintsha kanjani indawo yokulandwayo kuhlelo lokusebenza lwe-SnapTube?
Onke amavidiyo e-YouTube agcinwa ngokuzenzakalela ngqo kusitoreji sangaphakathi. Ukuyithola, ungalandela isixhumanisi Isitoreji sangaphakathi> I-SnapTube> Ividiyo. Uma kungenzeka kungabikho isikhala esanele ngemuva kokulanda amavidiyo amaningi, kungaphazamisa ukusebenza okufanele kwezinye izinhlelo zokusebenza. Idivayisi yakho izoqala ukusebenza kancane ngokuhamba kwesikhathi. Ukugwema lesi simo, ungashintsha indlela yokulanda yamavidiyo.
Inqubo yokushintsha indlela yokulanda:
Vula isilandeli sevidiyo se-SnapTube.
Kukhona isithonjana segiya ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini. Chofoza kuso ukuze uvule izilungiselelo.
Manje, khetha inketho «Landa indlela».
Bese ukhetha iMicroSD ukuze ulondoloze ividiyo kudivayisi yangaphandle kusukela manje.
Ungakha futhi ifolda ehlukile. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla, kunesithonjana sefolda, chofoza kuso.
Futhi, yinike igama elifana ne-SnapTube bese uyivula ngokuthepha kanye.
Kufanele uyiqinisekise ngokuchofoza ku- «Khetha le folda». Ungakha futhi ifolda engaphansi ngokuchofoza inketho "Yakha ifolda entsha".
Isicelo sizokubuza futhi ngesiqinisekiso, cindezela u- «Khetha» ukukuqinisekisa.
Manje indawo yokulanda ishintshwe ngempumelelo yaba isitoreji sangaphandle. Okokugcina, ungalanda ividiyo ngaphandle kokukhathazeka ngendawo yokugcina.
Ungadlala ividiyo kusuka kugalari noma ungalandela ngesandla iMenenja yefayela> i-SD Card> i-SnapTube. Ilokho kuphela.
Isebenza kanjani i-SnapTube?
Njengoba igama lesicelo lisitshela ukuthi lilandwa ngomzuzwana. Isebenza ikakhulukazi ngezinjini zokusesha ezahlukahlukene.
Usesho Lwesigaba: Isigaba Sokucinga sikusiza ukuthi uhlole okuqukethwe okufisayo njengoba ukwazi ukuxhuma ngezigaba eziyishumi ezihlukene. Isibonelo, amavidiyo ahlekisayo, izingoma, izithombe, njll. Ukushintshela esigabeni esisodwa kuya kwesinye, mane uskrole isikrini ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla.
Ukusesha kwegama elingukhiye: Ngokucinga kwegama elingukhiye, ungathola futhi amavidiyo owathandayo. Ngemuva kokuthola okufunayo, ungakulanda futhi ukugcine ukuze ukubuke kamuva.
I-Hit Trending: Ungathola futhi okuhamba phambili bese ushaya amavidiyo ngamashadi womculo nokunye okuningi kulokhu.
Singasho futhi ukuthi i-SnapTube APP kulula ukuyisebenzisa nokulandwa okusheshayo. Ukuthola umphumela we-HD, ungasebenzisa inguqulo yayo ye-premium ngo- $ 1.99 kuphela. Zombili izimbangi zayo iT TubeMate, iVidmate noma iVideoder (
landa ividiyo lapha) unokusebenza okufanayo, kepha ushintsho lusekuxhumanisweni kokulanda okunamandla ngezinketho ezahlukahlukene. Kufanele sisho ukuthi ungahle ungatholi lolu hlelo lokusebenza ku-Google Play Isitolo ngenxa yezinqubomgomo ze-copyright.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Ungayiguqula kanjani indlela yokulanda yohlelo lokusebenza lwe-SnapTube?
Sebenzisa izinga elinguziro laseCredomatic Costa Rica
Thola i-Credomatic Costa Rica Bac Card